Akhriso:- Xasuusta Maanta oo kale Qaraxii Hotel Shamow oo lagu dilay Mucalimiin, waalid iyo Arday wax tar lahayd!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Akhriso:- Xasuusta Maanta oo kale Qaraxii Hotel Shamow oo lagu dilay Mucalimiin, waalid iyo Arday wax tar lahayd!!
Akhriso:- Xasuusta Maanta oo kale Qaraxii Hotel Shamow oo lagu dilay Mucalimiin, waalid iyo Arday wax tar lahayd!!
Maanta oo kale 3-dii December 2009 ayey aheyd markii Qarax Ismiidaamin ah lagu Weeraray Hotelka Shamow oo ay ka socotay Xaflad Qalin Jabin ah oo ay ku Qalin jabinayeen Arday dhameysatay Jaamacadda Banaadir ee Magaalada Muqdisho.
Waxaa Qaraxaas lagu xasuuqay Wasiirro ka tirsanaa Dowladdii Xilligaas ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Dhaqaatiir ka qalin jabiyay Jaamacadda Banaadir iyo sidoo kale Waalidiin Goobta u yimid in ay Ubadkooda Farxadda la wadaagaan,balse Dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray Qaraxaas.
Dhanka kale isla 3-dii December 2015
3 december maalin la xasuusto waxaa maanta hal sano laga joogaa markii cadaw nolol diid ah ay gaarigeedii qarax ugu xireen wariye marxuumad Hindiyo Xaaji Maxamed markaas oo ay hooyo la.aan ka dhigeen caruur horay oo agoon u ahayd .ilaahay ha u naxariisto Hindiyo iyo dhamaan muslimiintii sida xaqdarada loo dilay waliba maanta waxaa sidoo kale ay ku beegan tahay 7 sano guuradii qaraxii hotel Shaamow ee aqoon yahanka Soomaaliyeed lagu laayay. aamiinta aan ugu kaalmeyno walaalaha dhamaan dhcdadaas naxdinta leh sawirro lagu xasuusto halkaan ka fiiriya.
Previous PostWar Deg Deg Ah : Ciidamo katirsan Maleeshiyaadka Maamulka Putland ayaa goordhaw la wareegay Xarumo muhiim ah oo kuyaala waqooyga Gaalkacyo!! Next PostMUUQAAL: Maxaynu ka ognahay Qolka ku dul yaalla Minaarad dheer ee saacadda Magaalada Makkah Daawo!!